Ameerikaa keessatti lakkoofsi namoota sababa Vayirasii koroonaatiin du’anii kuma 28 dabruu gabaafame - NuuralHudaa
Ameerikaa keessatti Kiibxata kaleessaa qofa namoonni 2, 228 vaayrasii koroonaatiin akka du’aniifi, walumaagalatti biyyattii keessatti lakkoofsi namoota sababa Vayirasii koroonaatiin du’anii 28,300 dabruu Reuter gabaase. Haaluma walfakkaatuun lakkoofsi lammiilee biyyattii Vayirasii Koroonaatiin qabamuun mirkanaahee 600,000 dabree jira.
Guutuu Addunyaa keessatti ammoo lakkoofsi namoota Vayirasii Koroonaatiin qabamanii miiliyoona lama kan dabre yoo tahu, lakoofsi namoota sababa Vayirasichaa du’anii 126,783 gahuu gabaasaaleen ni addeessu. Namoonni 485,000 ammoo dhibee kanarraa bayyanatanii jiru.
Gama biraatiin ammoo Bulchiinsi Traamp Diinagdee kufaa jiru baraaruuf jecha, uggurri sochii ummataa irra kaahame May 1/2020 ni kaafama jedhaa jira. Ogeeyyonni fayyaa biyyattii ammoo, jarjaraan sochii diinagdee jalqabsiisuun balaa qaba jechuun akeekkachiisan.
Nur hud soor qab muslim
jzkl inshaa Allah rabbii nuha eguu
Odeeffannoon isin nu biraan ga’aa jirtaan hedduu gaariidha akkanumatti itti fufaa.isin jaalanna!
zaraa Mohamed says:
gaafii wahii qabaa deebii isaa eessaan argachuuvdanda’a mee
safina magarso says:
October 24, 2021 sa;aa 7:56 pm Update tahe